UMakazi uMaria's, kwiGarden Apartment - I-Airbnb
UMakazi uMaria's, kwiGarden Apartment
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPitsa
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uPitsa iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ibekwe ngokufanelekileyo kumbindi wePano Lefkara uMakazi uMaria ubeka ezona ndawo ziphakamileyo zokuhlala kwilali yaseCyprus. Indlu yakudala eyakhiwe ngamatye ehlaziyiweyo, ejikelezwe yigadi ethe tyaba eneentyatyambo zeentyatyambo kunye neepatios ezenziwe ngamatye, uMakazi uMaria's ubonelela ngokudityaniswa okukhethekileyo kobutofotofo bale mihla, indawo enoxolo, ukufikeleleka kunye nomtsalane wesintu. Ineendawo ezivulekileyo kuyo yonke indawo yonwabela iimbono ezintle ezingathintelwanga kunye nempepho epholileyo eyamkelekileyo ehlotyeni.
Kukho amagumbi amathathu abanzi anegumbi elinye elinendawo yokungena yabucala evela egadini kunye neendawo zokuhlala ezingaphandle kwi-complex. Zonke iiyunithi zinikwe ngokunambitheka kunye nempahla yesiko eyenziwe ngesandla yaseSipro ngokuqwalasela iinkcukacha kunye nentuthuzelo engqondweni; banamakhitshi ale mihla, iscreen esisicaba sesatellite/umabonakude wentambo kunye noqhagamshelo lwe-intanethi ye-WIFI.
Ubuncinci Ukuhlala ubusuku obu-2.
Indawo enkulu enamagumbi okulala ayi-1, enomnyango wabucala osuka eGadini, ibalcony yabucala eneendawo zokujonga iintaba ezintle.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nefriji egcweleyo, ibhedi yesofa evula ibhedi ephindwe kabini kwigumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala elikhulu. I-Satellite TV kunye ne-WIFI, i-Heating AC ifakwe kwizinga.
Ilali entle yaseLefkara idume ngobuhle bayo, ubume bayo obukhethekileyo, igcinwe kude kube namhlanje, kunye nesithethe sayo sokwenza iileyisi. Ukuhamba ngeendlela ezimxinwa ezigangathiweyo zelali kuya kuyiba intliziyo yakho, kuvuselele iingqondo zakho kwaye kukubuyisele kwangexesha. Kumphakamo weemitha ezingama-700, kumazantsi eentaba zeTroodos, eli litye linqabileyo leelali zaseSipro likwimizuzu engama-20 kuphela ukusuka elunxwemeni lweRhuluneli eblue-flag, kwaye ngaphantsi kweyure yokuhamba ukusuka kwiidolophu ezinkulu zaseNicosia, eLimassol nase. Larnaca. Ikufutshane kwiindawo ezinomtsalane kubakhenkethi, iindawo eziphambili zezinto zakudala, ii-convents zamaxesha aphakathi, iimonki kunye neelali ezibukekayo ezisezintabeni.
I-Lefkara inika imozulu epholileyo, eyomileyo, indawo yasemaphandleni engonakaliswanga kunye nethuba lokuphumla kwindawo yasemaphandleni enobuhlobo, ekhethekileyo kunye noxolo kwaye uthathe uhambo olufutshane lokuhlola iCyprus. NgeLefkara njengesiseko ungonwabela iilwandle ezintle emini kunye nempepho epholileyo eyomileyo yasentabeni ngokuhlwa. Iikhosi zeGalufa kunye neTroodos square zihamba nje iyure.
Idolophu ekhethiweyo yokuphumla kwezidwangube zaseVenetian, owazisa abafazi basekhaya kubugcisa bokwenza iileyisi kumaXesha Aphakathi, iLefkara engabonakaliyo nengafunyaniswanga, isagcina iimpawu ezitsale i-aristocracy yakudala.
Umbuki zindwendwe ngu- Pitsa
Kangangoko banqwenela, bahlala bekhona ukunika ulwazi, izalathiso kunye nolwamkeleko olufudumeleyo.